सुदूरपश्चिममा बाघ र हात्तीले पार्टी प्रवेश गरेपछि… – Everest Dainik – News from Nepal
सुदूरपश्चिममा बाघ र हात्तीले पार्टी प्रवेश गरेपछि…
धनगढी र गोदावरी त कति नै छ र दूरी... हिँडेरै गएपछि एक घण्टामा पुगिएला । तर गाडीमा आउँदा समेत डेढ दुई दिन लाग्ने जनताको मनोभावना के भयो होला ?
“दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों”
हिन्दी साहित्यका लोकप्रिय शायर बशीर ब्रदले यी हरफहरु लेख्दा के सोचेर लेखेका होलान् भन्न सकिन्न । तर विगतको निर्वाचनमा जनतामाझ वाचा दिने नेताहरुले अहिलेका आफ्ना क्रियाकलाप हेर्दा भने पक्कै यसको अर्थ अनुभूति गर्छन् होला ।
अहिलेको याम दुश्मनीको भएको छ । दुश्मनी अर्थात् शत्रुताको ।
यो दुश्मनीका पछाडि झिनो तर्कहरु छन् र बढी छ पूर्वाग्रह ।
पूर्वाग्रह अर्थहीन पूर्वाग्रह ।
विपक्षीको पक्षमाथि, पक्षको विपक्षीमाथि ।
राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन, यो दुश्मनी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ ।
र, अहिले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश (केहीका लागि अस्वीकार्य) मा यो दुश्मनीले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
र यो दुश्मनी महाभारतको युद्द जस्तो छैन । मात्र दुई पक्ष लडाईमा भएजस्तो ।
बरु यहाँ आफ्नैहरु आफ्नैमाथि जाई लागेका छन् ।
विगतमा तिनै आफ्नाहरु आफ्ना थिए र अहिले आफ्नो केही स्वार्थ नमिल्दा आफ्नैहरु दुश्मन भएका छन् ।
गोदावरी दुश्मन भएको छ धनगढीको ।
यो त्यही गोदावरी हो, जसलाई धनगढीमा समावेश गरेर महानगरको परिकल्पना सुनाउने गर्थे नेताहरु ।
धनगढी नगरपालिका मात्र थियो यसअघि ।
राज्य पुनःसंरचना हुँदा धनगढी उप महानगरपालिका बन्यो । सात नम्बर अर्थात् सुदूरपश्चिमको एकमात्र उप महानगरपालिका ।
र, एउटा बलियो सम्भावना यो महानगरपालिका बन्ने थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाको पूर्वाधार विकाससँगै भविष्यमा दुबै स्थानीय तहलाई मिलाउन सकिएको स्थितिमा यो निकै उत्कृष्ट मेट्रो पोलिटियन सिटी अर्थात् महानगर बन्ने थियो ।
काठमाडौं महानगर या चितवन महानगर जस्तै ।
र, यसले समग्र सात नम्बरको विकासमा नै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
यो कुरा, विगतमा नेताहरुले गर्थे । चुनावको बेला । सुन्दर पश्चिम बनाउने उनीहरुले वाचा गर्थे । धनगढी, अतरिया जस्ता बजार क्षेत्रलाई चरम विकास गरेर त्यसक्षेत्रलाई शैक्षिक चिकित्सकीय र रोजगारको हब बनाउन सकिने वाचा गरेका थिए ।
यी वाचा गरेरै जनताले उनीहरुलाइ भोट दिए । त्यतिखेर गोदावरीलाई धनगढीमा मिलाउने आधारहरु तयार थिएनन् । त्यसैले यो महानगरपालिकाको एजेण्डा उनीहरुको भविष्यको सपना थियो ।
सबै पार्टीका नेताले यो वा त्यो रुपमा यो सम्भावनामाथि चर्चा गर्ने गरेका थिए ।
अहिले प्रदेश सभाको दुई तिहाईले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय गरेपछि भने धनगढीका तिनै नेताहरु रिसाएका छन् । उनीहरुलाई औडाहा भएको छ ।
धनगढी किन भएन ? गोदावरी किन भयो ?
उनीहरुले भविष्यमा यो गोदावरी पनि धनगढीकै मुख्य शाखा हुन्छ । यता धनगढीमा बजार हुन्छ, अतरियासम्म राजधानी फैलिन्छ र अरु क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुनसक्छन् भन्ने कुरा बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरुलाई थाहा छ, यो सम्भव छ र यो नै हुन्छ भन्ने । तर उनीहरुलाई एउटा इष्या छ ।
र, यही र्इर्ष्याले उनीहरुलाई तर्कभन्दा निकै पर लगिरहेको छ ।
बशीर चन्द्रले भनेजस्तै भविष्यमा लाज नै हुने गरी उनीहरुले गोदावरी भर्सेस धनगढीको नारा लगाए ।
र, भोली यदि त्यही गोदावरीलाई धनगढीमा मिलाएर महानगरको सपना पुरा गर्ने कुरा उठ्यो भने… त्यतिखेर ‘शर्मिन्दा’ हुनुपर्ने अवस्था नहोला र धनगढीका नेताहरुलाई ?
किन महानगरको सपना नै ठीक छैन भन्ने आँट गर्न सक्लान् उनीहरु ।
कति राम्रो हुन्थ्यो यदि…
प्रदेशको प्रस्तावित राजधानीका बारेमा कार्यदलले दिएको रिपोर्टमाथि पर्याप्त बहस भएको छैन । के आधारमा राजधानी गोदावरी राखियो र प्रदेशको नामांकरण सुदूरपश्चिम भयो भन्ने कुरा मिडियामा देखिँदैन । किनभने प्रदेशको नाम राख्नुका र राजधानी गोदावरी नै प्रस्ताव गर्नुका पछाडि एउटा यथेष्ट तर्कसंगत तथ्यहरुले कार्यदलले प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ । यदि ती तथ्यहरु सही थिए भने त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपथ्र्यो ।
१. सात नम्बर प्रदेशमा नौ वटा जिल्ला रहेका छन्, नौ वटा जिल्लाको एकल भौगौलिक इकाई मानेर केन्द्र पर्ने भूगोललाई राजधानी बनाउने सम्भावनाबारे अध्ययन भयो कि भएन ?
२. पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले कुन जिल्ला या क्षेत्रमा राजधानी बनाउन सजिलो हुन्छ र दीर्घकालिन महत्वको हुन्छ भन्ने कुरा हेरियो कि हेरिएन । यसो गर्दा बुँदा एकको भावनालाई समेट्ने विषयलाई ध्यानमा राखियो कि राखिएन ?
३. गोदावरीको प्रस्तावित राजधानी क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो ? त्यहाँ राजधानी विकास हुँदा त्यसले के तात्विक फरक पार्छ ? अन्य क्षेत्रभन्दा त्यो क्षेत्र नै किन उपयुक्त ठानियो ?
४. प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्ने बेला आमरुपमा के कस्तो खालको छलफल चल्यो । सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया के थियो ?
यी प्रश्नहरु सार्वजनिक नभएको कारण नै अहिले केही समूहले रोइलो मच्चाउने मौका पाएका हुन ।
तर यो रोइलो मच्चाउनेहरुले यी माथि भनिएका कारणहरुलाई उठाएको भए, मेरै गोरुको बारै टक्काको हठ छोडेर समग्र प्रदेशको बारेमा मन्थन अगाडि बढाएको भए…
सबैले यो आन्दोलनलाई सलाम गर्थे ।
तर त्यसो भएन बरु उनीहरुले गोदावरीमा राजधानी बनाउने कारणको त कुरै छोडौं ‘मान न मान मै तेरा मेहमान’ भनेझै जबर्जस्ती धनगढीमैं राजधानीको माग अघि सारे । यसो माग गर्दा अन्य ठगिएका जिल्लाका जनताको अवस्था के होला ? एक रत्ति पनि सोचेनन् ।
राजधानी त सबै जिल्लाका जनतालाई चाहिँदो होला नि ?
बाजुरा त्यति विकट जिल्ला, दार्चुला त्यति परको जिल्ला। उनीहरुले पनि पायक पर्ने स्थान खोजेका थिए होलान् नि ?
धनगढी र गोदावरी त कति नै छ र दूरी… हिँडेरै गएपछि एक घण्टामा पुगिएला । तर गाडीमा आउँदा समेत डेढ दुई दिन लाग्ने जनताको मनोभावना के भयो होला ?
के पक्ष र प्रतिपक्षले यो विषयमा कहिल्यै सोचे होलान् ?
बाघ शेरको तुक न बेतुकको बहस
यिनै कुराले गर्दा राजधानी बिरोधको आन्दोलनले त्यो उचाईं नपाएपछि अहिले उनीहरुले बाघ र हात्तीलाई राजनीतिमा तानेका छन् । त्यो बाटो त बाघ हिँड्ने बाटो पो, त्यहाँ त हात्ती पो जान्थ्यो । पर्यावरण मास्न पाइन्छ र ?
उनीहरुले भन्ने गरेका तर्कहरु यिनै हुन ।
तर के धनगढीमा राजधानी बनाउँदा पर्यावरण सप्रिन्थ्यो त ?
कि त्यसैपनि कंक्रिट हुँदै गएको सहर झनै कुरुप बन्थ्यो ?
यी प्रश्न सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।
बरु हात्ती र बाघलाई राजनीतिक दाउपेचमा ओरालेर उनीहरुले बहसलाई झन अर्को दिशातर्फ मोड्न खोजिरहेका छन् ।
राजनीतिमा दूरदर्शिता भएन भने क्षणिक आवेगमा चालिने कदमहरुले भविष्यलाई नै संकटमा पार्छ । राम्रो त त्यतिखेर हुन्छ जब हामी व्यक्ति या समूहको स्वार्थ भन्दा समग्रको हितका लागि काम गर्छौं । आफू त्याग गरेर पनि सबैका लागि राम्रो हुने बाटो रोज्छौं । यसो गरियो भने त्यो पो सही राजनीति ।
ये जो हालत हैं ये सब तो सुधर जायेंगे,
पर कई लोग निगाहों से उतर जायेंगे‘
नत्र भने ठ्याक्कै यही हिन्दी शायरी जस्तै हुन्छ राजनीति ।
अहिलेको अवस्था त सुध्रिएला तर त्यो बेलासम्म कैयौं मानिसहरु अन्यको दृष्टिमा स्खलित भइसक्नेछन् ।
ट्याग्स: dhangadhi, Pradesh 7